सेवा दिने नाममा लाइसेन्स होल्ड गर्नेमाथि निर्मम बन्नुस् : सञ्चारमन्त्री खतिवडा
समाचार अर्थ नीति प्रविधि
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २० फागुन
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दूरसञ्चार क्षेत्रको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्मम भएर लाग्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकाे छ । मंगलबार दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २२औँ वार्षिकाेत्सवमा उनले यस्तो निर्देश दिएका हुन् ।
उनले दूरसञ्चार सेवा दिने नाममा लाइसेन्स लिने र सर्तअनुसार काम गर भन्दा अदालत धाएर दु:ख दिने काम भएको गुनासो गरे । 'अन्य क्षेत्रमा लाइसेन्स होल्ड गरिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, यहाँ आएपछि थाहा पाएँ,' खतिवडाले भने, 'सेवा दिने नाममा लाइसेन्स लिने र होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति छ, निर्मम ढंगले कानुनको प्रयोग गर्नुस् ।'
उनले प्राधिकरणलाई कसैले तोक लगाएको भरमा फ्रिक्वेन्सी नबाँड्नसमेत आग्रह गरे । दबाब, अभाव र प्रभावमा परेर फ्रिक्वेन्सी दिने कार्य गलत भएको भन्दै आवश्‍यकताका आधारमा सुझबुझ ढंगले काम गर्नका लागि उनले आग्रह गरे।
नियामक निकायको अधिकार सरकारले नखोस्ने तर जवाफदेही नियामक निकाय बन्नका लागि पनि खतिवडाले आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडाले विश्वमा नै दूरसञ्चार सेवा निकै प्रतिस्पर्धी भएको भन्दै नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धी रूपमा सेवा दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले फोनमा कुराभन्दा पनि डाटा प्रयोगकर्ता बढेको भन्दै उनीहरूले सेकेन्डका भरमा प्रवभाकारी रूपमा सेवा दिन आग्रह गरे ।
अब कम्पनीहरूले डाटामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताए । वित्तीय काम गर्नेदेखि सबैलाई सेकेन्डको भरमा नै डाटा चाहिने भएकाले यसमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको खण्डमा समस्या हुने उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २०, २०७६, १२:४८:००